4ကုလား@veve9satturdaynight.net | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Copy/Paste » 4ကုလား@veve9satturdaynight.net	16
Posted by ဖိုးထောင် on Jul 1, 2012 in Copy/Paste | 16 comments
စနေနေ့ညက သူတို့ကိုသူတို့ ကုလားလို့ပြောနေတဲ့ ကုလား ၄ ယောက်နဲ့ ဘီယာသောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ကတော့—
(၄) ဖရဲဟူစိန်ရာရှစ် —- တို့ဖြစ်ပါတယ် မယုံမှာစိုးလို့မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဒါက ရွာသားတို့အကြိုက် ကရဝိတ်လေးပေါ့ဗျာ
ရွာအကြောင်းနဲ့ ပေါက်တတ်ကရပြောကြ နည်းနည်းအာသွက်လာကြပြီ
ရွာသားများစု၍ အမှတ်တရ မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံရိုက်ကြသည်
ထို့နောက် တွင်ကား………. ………….. နောက်ဆက်တွဲဓါတ်ပုံများ မပါတော့ပါ
မောင်ပေ says: အားပါး
ကိုယ့်ရွာသားတွေသောက်ချက်ကတော့ ““9”” တင်မဟုတ်တော့ဘူး ၊ ကျော်လောက်ပြီ ။
ကိုအောင်ပု ကို စိန်ခေါ်လို့ ရပြီ… ဟီဟိ
ကျိကုန်း says: အော် တရားမရသေးဘူးလား ဒါကာတို့
မကောင်းတာကို သိရက်နဲ့ ဘာလို့မိုက်မဲနေတာလဲ
အင်း သတ္တဝါများ ကျန်းမာချမ်းသာကျပါစေ
မွတ်တူးစွတ်ပတား says: အတိုကျီးတို့
တလားနော် ဝက်မစားဘူး ဒုတ်ဒိုးစားတယ်
Moe Z says: တရုတ်ဖြစ်လိုက် … က… အဲ မြန်မာမွတ်ဆလင်ဖြစ်လိုက်နဲ့
အဗေတာကတူနေတာခက်တယ်နော Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2033
ကိုရင်မောင် says: အဒူလဒစ် တယောက်ရောမပါ ပါလား……
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ရှိ
အဂ္ဂမဟာ ပဏ္ဍိတ လီးကြီး says: မင်းတို့ အဆင့်အတန်းမရှိ ရေးချင်တိုင်းရေးလို့ ငါလဲရေးတယ်ကွာ
မင်းတို့ က ပုတ်ခတ်စော်ကားလွန်းနေပီ။လူ လိုအသိစိတ်ရှိပါ လို့ 
ဖိုးထောင် says: လူစုံရင် ဒိုးမယ် လာထား အသဲကွဲလို့ ဖုန်းဆက် ရင်မဖွင့်ကြေး ဟေးဟေး
ဘဲဥ says: ဝှါးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
တော်တေးဒယ် ……….. အိမ်က ………….. က မဆူလို့ ဟီးးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 570
ဖိုးထောင် says: ညက တင်ရင်းအိပ်ပျော်သွားလို့ အသစ်ပြန်တင်ရတယ် မနက် ၁၁ ၃၀ မှာနိုးတယ် ဟာဟ တော်သေးတယ် ဒေါ်လေးမဆူလို့ မိန်းမရှိတဲ့သူတွေ ဒါတွေ မခံစားရပါဘူး အာဟိ
pooch says: အော်….. မနေ့ညက မူးပြီး ကျုံးထဲ ငါးဖမ်းလို့ ရဲဖမ်းခံရတယ် ဆိုတဲ့ ၄ ယောက်လား… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4992
သားဦး၊မြေးဦး says: အားပါးပါး မသောက်ရတာ နာသဗျာ။အားကျလာပီ။အနံ့ ကို ဒီကရ
ဖိုးထောင် says: ဟုတ်တာပေါ့ ပိုးလေးရယ် ငါးဖမ်းတယ်ဆိုတာလဲ မင်းအတွက်ပါ (ကောလိပ်ဂျင်အသံဖြင့်) မင်းမှာ ရက်စက် တတ်တဲ့နှလုံးသားရှိမှန်းသိပ်သိသွားတာပေါ့ကွာ မင်းနဲ့ကိုယ်ရဲ့ရှေ့ရေးကိုတောင် ပြန်ပြီးသုံးသပ်ရတော့မယ် အာမခံလေးတောင် လာမပေးတဲ့မင်း ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက် ကျ(ကျမ)နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့မင်း…. မင်း…..မင်း……………. တကယ်တမ်းကျတော့ မင်းနဲ့ကိုယ်ဟာ ……………………. ဘာမှဆိုင်ပါဘူး အဟိ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 861
ရဲစည် says: အိမ်း….. လုပ်ထားကြပေါ့ မကြာခင် ခေါင်းဆောင်ကြီး ကျုပ်ကိုယ်တိုင် လာမှာဆိုတော့ ဒင်းတို့သေပီသာမှတ်…
သွပ် … သွပ်
ကျော် နဲ့ ကျ ကကျုပ်မူပိုင်နော် လိုချင်လို့တော့ ဟုတ်ဝူး ရီဆပတ်ထ်…ရီဆပတ်ထ် :D
အယာတိုလာ ဗလာဒီမာ အမာဒီနီ ဆက်ဒမ်ရဲစီ
etone says:ိဟိုဖိနပ်ကို နာမြင်ဖူးတယ်…………. ခြေထောက်တွေကိုမြင်ရတာတောင် ဒီလောက်ဥပဓိရုပ်ကောင်းတာ …
မျက်နှာတွေမြင်ရလျှင် ပုလင်းထဲက အရည်တွေ မသောက်ပဲ မူးသွားနိုင်တယ် အဟိ ။ :P
ဖိုးထောင် says: မအီးတုံးက ခြေထောက်နဲ့ ဖိနပ်တွေ့တာနဲ့ကို ကြည်ညိုနေပြီ အဟတ် ဟတ်ချိုး ဝက်ခေါက်သုတ်လေးက ကောင်းမှကောင်း
Comments By Postမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ - ခင် ခ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - အလင်း ဆက်bin bo..........(ဘင်ဘို) - မိုး မင်းသား - TNAရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - GaviaGirl - Ma Eiအမုန်းတွေဝေး အပြုံးတွေပေးမယ့် ဒီည................................ - padauk moe - မောင် ပေတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ - KZ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - မောင် ပေ - ရွှေတိုက်စိုးမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - မောင် ပေ - Mr. MarGaအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ - Mr. MarGa - အရီးခင်လတ်ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - Mr. MarGa - Mr. MarGaအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - Mr. MarGa - Mr. MarGaကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - Lay Paiသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - Mr. MarGa - KZမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - Mr. MarGaရထား ထွက်တော့ မယ် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - မဟာရာဇာ အံစာတုံးအဟံ ပထမံ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးသို့ ချစ်သောဖေဖေ - အရီးခင်လတ် - Phoe Thitsarလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - အရီးခင်လတ် - မွေ့ကေသာအိပ်မက်မင်းသမီး - Phoe Thitsar - KZနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - Mobile13 - မဟာရာဇာ အံစာတုံးကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - Mobile13 - အရီးခင်လတ်ဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - ကြောင်ဝတုတ်Passport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - အရီးခင်လတ် -etoneမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ဦး ကျောက်ခဲ - ko pauk mandalayEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67257 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66748 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59027 Kyats )MaMa (57851 Kyats )Top Posts & Pagesဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews